ဝုဖ်ဘတ်အသင်းအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ရမည်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လိုကြောင်းနည်းပြပြောကြား - FOX Sports Asia
ဝုဖ်ဘတ်အသင်းရဲ့ နည်းပြ ဘရူနိုလာဘာဒီယာ က သူတို့အသင်းအနေနဲ့ တန်းဆင်းဇုန်ကို ရှောင်ရှားနိုင်ဖို့အတွက် ကိုလုံးအသင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ အာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်ရှိဖို့ တိုက်တွန်းပြောကြား လိုက်ပါတယ်။
လက်ရှိချိန်မှာတော့ ဝုဖ်ဘတ်အသင်းဟာ ဘွန်ဒက်စ်လီဂါ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အဆင့် (၁၆)နေရာ မှာ ရပ်တည်နေပြီး အဆင့်(၁၅)နေရာမှ ဖရိုင်းဘတ် အသင်းကတော့ (၃)မှတ် အသာရရှိထားပါတယ်။
#Labbadia: “I’m familiar with situations like the one we find ourselves in. For the most part I’ve overcome them and I haveaplan for how we’ll approach this game.” #WOBKOE
— VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) May 10, 2018
ဝုဖ်ဘတ်အသင်းကတော့ ဖရိုင်းဘတ်အသင်းထက် ဂိုးကွာခြားချက် အသာရထားပြီး ကိုလုံးအသင်းနဲ့ ပွဲစဉ်မှာ အနိုင်ရရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၊ တကယ်လို့သာ ဖရိုင်းဘတ်အသင်းကလည်း နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာ အော့စ်ဘတ်အသင်းကို ရှုံးနိမ့်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ဝုဖ်ဘတ်အသင်းအနေနဲ့ တန်းဆင်းဇုန်ကို ရှောင်ရှားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
လက်ရှိတန်းဆင်းဇုန်မှာ ကိုလုံးအသင်းက တန်းဆင်းသွားခဲ့ရပြီဖြစ်ပေမယ့် ဟမ်းဘတ် အသင်းကတော့ ဝုဖ်ဘတ်အသင်းနဲ့ (၂)မှတ်သာ ကွာဟတာကြောင့် မျှော်လင့်ချက် အနည်းငယ် ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်။
#Labbadia: “We can’t change what’s happened in recent weeks and months. We’ve got ourselves into this situation and now we have to bear the brunt of it together on the pitch.” #WOBKOE
“ အရင်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကို မတွေးတော့ပါဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အဲဒါတွေက ပြန်ပြောင်းလဲလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကိုယ့်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်ပဲ အာရုံစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။ အသင်းလိုက် ပုံစံကောင်းတစ်ခုလုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ကွင်းထဲက လူတွေအားလုံးကလည်း ကျွန်တော်တို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာသိပါတယ။် ” လို့ နည်းပြ ဘရူနိုလာဘာဒီယာက ပြောပါတယ်။
“ ကိုလုံးအသင်းက ကျွန်တော်တို့ကို ဘာဖိအားမှ ပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှော်ကေးနဲ့ပွဲမှာဆိုရင် ကိုလုံးအသင်းဟာ (၂)ဂိုး ပေးလိုက်ရပြီးမှ သရေရလဒ်ပြန်ရအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မကြာသေးခင် ကပွဲတွေမှာ သူတို့ နိုင်သင့်ခဲ့ပြီး ဘိုင်ယန်မြူးနစ်အသင်းကိုလည်း ရင်ဆိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုလုံးအသင်း က အလွယ်တကူ အလျှော့ပေးတတ်တဲ့ အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီပွဲမှာလည်း သူတို့ အဲဒီလို ကစားမှာပါ။ ကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ် အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့ပါ။ ” လို့ နည်းပြ က ဆက်လက်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Home FOX Sports မြန်မာ ဘောလုံး ဝုဖ်ဘတ်အသင်းအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ရမည်ကိုအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့လိုကြောင်းနည်းပြပြောကြား